मेयरलाई कमिसनमा १२ लाख नदिंदा कृषि अधिकृत माथि कुटपिट - Shirish News
मेयरलाई कमिसनमा १२ लाख नदिंदा कृषि अधिकृत माथि कुटपिट
२०७८ आश्विन ८, शुक्रबार २१:२८ बजे
जनकपुरधाम – धनुषाको एक नगरपालिकाका कृषि अधिकृतलाई मेयरको निर्देशनमा कुटपिट भएको छ ।
विदेह नगरपालिकाका कृषि अधिकृत चन्देश्वर ठाकुरमाथि कार्यालयमै कुटपिट भएको हो । अधिकृत ठाकुरले मेयर बेचनदासको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आफुमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन् ।
अधिकृत ठाकुरले भने, ‘शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजेको समयमा मेयरका लठैत वडा नं. ३ बस्ने सत्रुधन राय आफुलाई कार्यालय मै आएर गालीगलौज गर्दै पिठ्युमा एक लात र गालामा एक झापड हिर्काए ।’
कृषि शाखा मार्फत नगरपालिका भित्र भएको विभिन्न कृषि कार्यक्रमको मेयर दासले मोटो रकम कमिसन मागेको र सो नदिएको निहुँमा कुटपिट गराएको अधिकृत ठाकुरले आरोप लगाएको छ।
उनले आफुलाई कुटपिट गराउनुमा नगरपालिकाका निमित प्रशासकीय अधिकृत संजिव साहको समेत संलग्नता रहेको बताए । ठाकुरको अनुसार आफू माथि कुटपिट भएको घटना लगतै प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी दिन जाँदा उल्टै किन घटना गराएको भनेर प्रश्न गरे । प्रशासकीय अधिकृत संग त्यहाँ रहेका मेयर दास स्वयं पनि अभद्र गालीगलौज गरेको अधिकृत ठाकुरले आरोप लगाए ।
अधिकृत ठाकुरले भने, ‘मेयर साहेब आएर मलाई गाली गर्दै तेरो बाउ हँु म, मैले भनेको नमान्ने ? तलाई कसैले बचाउन सक्दैन । भनेर गालीगलौज गर्नुभयो ।’ अधिकृत ठाकुरले अगाडि थपे, ‘मेयर साहेबले कृषिमा भएको विभिन्न कार्यक्रमको मसंग १२ लाख रुपौयाँ कमिसन माग्दै हुनुहुन्थ्यो । म कहाँबाट कमिसन दिनु । त्यहि निहुमा ममाथि मेयरले लठैत भिराएर कुटपिट र आफै स्वयंले पनि गालीगलौज गर्नुभयो ।’
अधिकृत ठाकुरले एक महिना अघि मेयरका भाई लखन दासले १० वटा बाख्रा वितरण गरी सयवटाको भुक्तानी लिएको सूचना पत्रकारलाई दिएको निहुँमा मेयरले यस्तो गराएको हुन सक्ने आशंका वडा नं. ४ वडा अध्यक्ष विनोद गोहितमानको छ । उनले ठाकुरले बाख्रा वितरण सम्बन्धी यर्थाथ जानकारी दिएको बेलादेखि अधिकृतमाथि मेयर रुष्ट रह्दे आएको र अहिले कुटपिट गराएको वडाध्यक्ष गोहितमान ले बताए ।
यस घटना सम्बन्ध मेयर दास संग सम्पर्क गर्दा उनले कृषि अधिकृत ठाकुरले जनताको काम नगरेकाले जनताले घेरा हालेको बताउँदै केहि कुरा जानकारी लिनुपरे नगरपालिकामा आएर बुझ्नु भन्दै जंगिए ।
झण्डै दुईसाता अघि मात्रै जनकपुरमा एक महिलासंग दुव्र्यहार गरेको भन्दै मेयर दासमाथि कुटपिट भएको थियो । त्यस अघि नगरपालिका कार्यालय मै एक कार्यालय सहयोगीसंग मालिस गराएको तस्बीर सार्वजनिक भएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।